काठमाडौं, ४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगातार पेल्दै गएपछि नेकपामा झन् ठूलो संकट आइलागेको छ । यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षसँग पटक–पटक गल्ती नदोहोर्‍याउने सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अटेरीपन अझै छोडेका छैनन् ।
विशेषगरी सरकार सञ्चालन र महत्वपूर्ण नियुक्तिमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग मिलेर अगाडी बढ्ने भन्दै गरेपनि निर्णय गर्ने बेला ओलीले एकलौटी गरेको आरोप छ । पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद विस्तार र कार्यविभाजनमा पनि ओलीले आफ्नै गुटकालाई मात्रै च्यापेपछि पार्टीमा ओलीको आलोचना झन् बढेको छ ।
तर, ओलीसँग पटक-पटक भेट गरेर पनि दह्रोसँग कुरा राख्‍न र पार्टी निर्णयमा अडिग रहन नसकेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो भेटमा त माधव नेपालले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य नै प्रहार गरेको नेकपामा चर्चा छ । ‘कमरेड प्रचण्ड, तपाईं त्यै प्रचण्ड हो त ?’, एउटा अनौपचारिक बसाईमा नेपालले भनेका थिए । नेपालको कुरा सुनेर मुसुक्क मुस्कुराएका प्रचण्डलाई नेपालले फेरी सोधे, ‘ओलीजीसँग तपाई किन दह्रो कुरा राख्‍न सक्नुहुन्‍न ? उहाँ पेल्दै जाने हामी उहाँसँगै मिलेर अघि बढौं भनिरहने मात्रै हो त ?’
१० वर्षे जनयुद्धको समयमा पनि प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष भेट गरेका र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्डसँग राम्रै हेलमेल भएका नेता नेपालले ओलीसामू प्रचण्डको शक्ति क्षीण भएको देखेको पनि बताउने गरेका छन् । हिजो म एक्लै लड्दा पनि ओलीजीलाई आच्छु-आच्छु बनाउँथे तर आज हामी झन् पछि झन् किन निरिह जस्तो बनेको भन्दै नेता नेपालले सुनाए, ‘संघीय संसद र पार्टी दुवैमा हामी बलियो भएपनि मन्त्रीपरिषदमा कमजोर भयौं ।’
पछिल्लो समय ३ जना मन्त्री थपिँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट कोही परेनन् । राजदूत नियुक्ति,कार्यकर्तालाई अप्रत्यासित रुपमा दिईने राजनितीक नियुक्ति र मन्त्रीपरिषद विस्तारमा समेत एकलौटी गर्दै आएका ओलीसँग कसरी लड्ने भन्ने बारेमा प्रचण्ड-माधव समूहमा छलफल हुने गरेको छ । यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लगिएपनि उनलाई त्यत्तिकै थन्काईएको मात्रै छ ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रिय समिती बैठक बस्न नसक्नु र सचिवालय बैठकले गरेका कतिपय निर्णयहरु पनि विवादमा पर्नुले नेकपामा अझै संकट टरेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूहभित्र पनि ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने वा निहुँ खोजीरहने भन्नेमा एकमत छैन । पटक–पटक मिलेर अगाडि बढ्न खोज्दा झन् आफैंमाथि धोका भएको भन्दै प्रचण्डले पनि ओलीसँग अब वारपारको लडाईं आवश्यक भएको बताउन थालेका छन् ।
ओलीसँग रिसाएका प्रचण्ड बालुवाटारबाट टेलिफोन आउँदा पनि महत्व दिँदैनन् । आफ्ना केही विश्वासपात्र पूर्व माओवादीका नेताहरु समेत ओलीतिर ढल्केको संकेत पाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेका छैनन् । त्यसैले पनि दशैंलगत्तै ओलीसँग डटेर कुरा राख्‍ने र आवश्यक परे समानान्तर पार्टी चलाउनेसम्मको तयारी गरिने प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
उपत्यकामा २७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप : तालिम, सेमिनार र बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने
मंगलबार थपिए ३ हजार ३ सय ८३ कोरोना संक्रमित, २४ जनाको मृत्यु
बङ्गलादेश र अस्ट्रेलियाबीचको टी-२० श्रृंखला आजदेखि
‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेटमा ओभल इन्भिन्सिबल्सको जीत
थपिए ३ हजार कोरोना संक्रमित, २३ जनाको मृत्यु
छिन्‍नमस्ताबाट चोरी भएको मुकुटसहित एक पक्राउ
अलमुताइरी भन्छन्- अब साफ च्याम्पियनसिप जित्‍नु छ, जित्छौं !
प्रिसिजन मैत्रीपूर्ण खेलमा चेल्सीले आर्सनललाई हरायो
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज पनि बस्दै